Ny rano mitete dia navadika ho zavakanto miaraka amin'ity mpanakanto ity | Famoronana an-tserasera
Ny kanto manana ny haino aman-jery isan-karazany mba hahatratrarana vokatra iray ary manintona ny mason'ny mpijery izy mba hanomezana aingam-panahy na hamenoana azy ireo amin'ny fahatsapana, hevitra na toe-pihetseham-po.
Amin'ny maha-rano azy indrindra dia mahaliana toa an'ireo sary rehetra ireo, mazàna manana andraikitra lehibe toy ny mitranga amin'ny loko rano, acrylic na menaka. Ampiasain'i Aravis Dollmenna izany mba hamokarana sary vitsivitsy miaraka amin'ny rano mitete izay napetrany tamim-pahendrena hametahana sary amin'ny sary izay hanjavona amin'io fotoana io.
I Dollmenna tenany ihany no manondro ny fomba nanombohany hampivelatra ity fomba kanto manokana ity rehefa nampahafantatra azy ny Instagram ny zanany lahy telo taona lasa izay. Ho an'io dia mampiasa teknika manokana novolavolainy izay ahafahany mamorona sary avy amin'ny rano mitete.
Fomba manokana an'ny atambatra ireo rano mitete ireo mamorona karazana fialam-boly rehetra izay tadiavinao matetika ny fahatsorana ary inona ny hazavana voajanahary mba hanomezana taratra mety mba hisy ny firindrana amin'ny fakana farany amin'ny fakantsarinao.
Andiana sanganasa tena samy hafa izay tena izy tany am-boalohany ilay kaopy latsaka izay nalatsaky ny rano manaova andiana endrika boribory, na ilay felam-panala amin'ny endriny manokana.
Ireo asa zarainay midika hoe freshness be dia be miaraka amin'io volomboasary io ihany izay mampiseho ny tsy itovizany amin'ny rano matetika, dia mitondra antsika amin'io endrika fanehoana manokana an'ity mpanakanto ity.
Anananao ny azy Instagram hahitana ireo asa rehetra azo alaina avy amin'ilay tambajotra sosialy fanta-daza ary manampy antsika amin'izany mahita mpanakanto vaovao isan'andro izay mitady endrika hafa sy hevitra hafa hisamborana ny tontolo manodidina azy, na avy amin'ny abstract na hyperrealism.
Tsy ela akory izay nanana moanina izahay izay manandrana mitady ny rano ao anaty menany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fanovana rano dia mitete ho zavakanto